RASMI: Lionel Messi Oo Dalab Ka Helay Kooxda Ugu Xun Dunida Oo Dhan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Lionel Messi Oo Dalab Ka Helay Kooxda Ugu Xun Dunida Oo Dhan
RASMI: Lionel Messi Oo Dalab Ka Helay Kooxda Ugu Xun Dunida Oo Dhan
July 2, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga 3
Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ayaa uu soo gaadhay dalab uga yimid koox lagu magacaabay “Naadiga ugu xun adduunka”, taas oo doonaysa in ay la saxeexato laacibkan.
Kabtanka Barcelona ayaa uu heshiiskiisu dhamaaday maalintii ugu dambaysay bisha June, waxaanu hadda ku sugan yahay dalkiisa oo uu kala qayb-gelayo tartanka Copa America isagoo xor ah oo aan kooxna heshiis kula jirin.
Laacibkan ayay kooxdiisu wali qabtaa rajo ah inay sii haysan doonto, laakiin waxa walaac ku haya in sannadkii hore uu dalbaday inuu iska tago waliba qaab fool xun oo muran iyo khilaaf ah uu markii dambe ku joogay, kaddibna uu iska diiday heshiisyo cusub oo ay u bandhigtay Barca bilihii ugu dambeeyey.
Messi oo lix jeer ku guuleystay abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or, waxa la filayaa in aanu marnaba koox heerkeedu hooseeyo tagin waqtigan, sababtoo ah waxa uu doonayaa inuu ku dagaallamo xiddignimada iyo koobabka waaweyn.
Kaddib markii uu heshiiskiisii Barcelona dhamaaday June 30, waxa Lionel Messi soo gaadhay koox lagu tilmaamay tan ugu xun adduunka oo dhan, taas oo dalab rasmi ah usoo dirtay 34 jirkan.
Kooxda reer Brazil ee Ibis Sport Club oo ka ciyaarta heerarka hoose ee waddanka Brazil ayaa barteeda bulshada ku daabacday warqad rasmi ah oo xambaarsan dalab ay u dirtay Lionel Messi.
Kooxdan ayaa lagu daray Buugga Dhacdooyinka Adduunka ee ‘Geinness Book of World Records’, sababtuna ma aha wanaag ee bahdilaad iyo fadeed. Ibis Sport Club oo ka dhisan magaalada Recife waxay caan ku noqotay guulo la’aan iyo bahdilaad muddo dheer socotay.
Muddo saddex sannadood iyo 11 bilood ah ayaanay wax guul ah gaadhin oo dhamaantood laga badinayay marka laga reebo kulamo yar oo ay barbarreeyeen, kaddibna waxa lagu daray buugga dhacdooyinka dunida.
Ibis Sport Club ayaa lama filaan ka dhigtay adduunyada xalay, kaddib markii ay barteeda Twitter-ka oo ay ku taxan yihiin 300,000 qof ay ku daabacday dalab rasmi ah oo ay u bandhigtay Lionel Messi, kaas oo ay ku qoran yihiin arrimo cajiib ahaa.
Faahfaahinta dalabka ay Ibis Sport Club u dirtay Lionel Messi
Dalabkan ayaa ka kooban 15 sannadood oo uu Lionel Messi u ciyaarayo kooxda, laakiin marnaba ma xidhanayo lambarka uu aadka u jecel yahay ee No.10. Tani waa laba qodob oo aan macno badan lahayn, waxaase qosolku yahay kuwa kasii hooseeya oo ah sidan:
15 sannadood oo heshiis ah oo ka bilaabmaya July 1, 2021
Mushhrkiisu wuxuu ku xidhnaanayaa waxsoosaarkiisa, kaliya haddii uu muujiyo inuu u qalmo ayaanu heli doonaa mushahar.
Looma ogola inuu dhaliyo goolal badan.
Looma ogola inuu koob kula guuleysto kooxda
Ma xidhan karo No. 10 (Sababtu waa in kooxdani xilli horeba hawlgab ka dhigtay lambarkan oo uu xidhan jiray Mauro Shampoo)
Waa inuu SADDEX JEER ku dhaarto isagoo muraayadda hor taagan, in Pele uu ka wanaagsanaa Maradona.
Waa kan dalabka ay Ibis Sport Club u dirtay Messi:
Arintani inay kaftan tahay ayaan filayaa
kulahaa Captainka Barcelona meshaan Wax liiska so qoraa Yaap bal nin aan xitaa U safan karin bilaa heshiis bey ku leyihin captainka koox hebel
hadalka iska saxa haduu page kaani leeyahay Tafatire Messi Hadda ma ahan Captain ka barcelona Xitaa Player kooda ma Ahan Ee wuu Ahaan Jiray lkn masheegin Hadii jinni Bajaqlona Idiin Hayo Sidii Goolfm